--Lọ - Forex Lens
Anya gị n'ime Ahịa.
Choo ahia ahia.
BỤ FOREX LENS
Lelee, Mụta, ma uru ọnụ
anyị na obodo ahia anyi n'ime
Tradinglọ ahịa Forex & Discord server
MGBEBOR DIS NTCTA (EGO)
Soro ụlọ ahịa Forex anyị na-enweghị atụ
ebe anyị na-enuba LIVE kwa ụbọchị
iji nye gị nyocha ahịa ahịa dị ndụ
& ahia echiche n'oge New York
& na/ma ọ bụ nnọkọ London.
BR DIS NKWUKWUmalitere
AKW TRKWỌ AKWADEKWỌ AKW .KWỌ
uru EGO ohere karịrị 4 ndị ọkachamara nyocha ụbọchị ọ bụla maka Ajụjụ & A, nzaghachi na
echiche ahia gị, & ịdọ aka na ntị maka ntọala azụmaahịa dị elu
ịchọ maka ahịa Forex & Crypto.
Maka naanị kọfị kwa ụbọchị! Malite na Taa
Nweta uzo akwukwo akwukwo ihe kariri 100 nke vidio.
Anyị na -akụzi usoro azụmaahịa siri ike iji nye ndị ahịa ezigbo EDGE n'ịzụ ahịa ahịa.
Ricnye ọnụahịa ndị otuSonyere anyi na Discord
Anya gị n'ime Ahịa. Choo ahia ahia na Forex.
Lelee, Mụta, na PROFIT yana ndị ahịa anyị n'ime Forex trading room Portal na Discord server
Soro ọnụ ụlọ Forex na-enweghị atụ ebe anyị na-asọpụta LIVE ọtụtụ ugboro n'ụbọchị na-enye gị nyocha ahịa ndụ na echiche azụmaahịa n'oge nnọkọ New York na London.
Nweta uzo ziri ezi karịa ndi nyocha oru 4 kwa ubochi maka Q&A, nzaghachi na echiche ahia gi, na ime ka ndi ahia di elu kari ichota na ahia Forex na Crypto.
Nweta uzo akwukwo akwukwo ihe kariri 100 nke vidio. Anyị na-akụzi atụmatụ aghụghọ siri ike na-arụ ọrụ n'ezie ma na-enye ndị ahịa ezigbo EDGE n'ahịa ahịa.
Obodo Ezigbo Ahịa
Nnukwu ndị ahịa na-azụ ahịa ebe a, na ndị ị na-azụ ahịa n'okwu
Soro obodo nke ezigbo ndị ahịa wee jiri ezigbo ụlọ ọrụ gbara onwe gị gburugburu. Isi ihe anyị lekwasịrị anya bụ inyere gị aka imeziwanye, ma were nkà gị gaa n'ọkwa ọzọ ka ị bụrụ onye ahịa ka mma na nke na-erite uru.
Mmiri iyi kwa ụbọchị & Market Analysis
Nyocha ahịa ahịa ndụ na oge Q&A na ndị nyocha ọrụ aka anyị
Anyị na-enuba LIVE kwa ụbọchị n'oge nnọkọ New York na/ma ọ bụ London, na-enye gị nyocha ahịa ndụ n'ahịa Forex na Crypto. Ndị otu nwere ike jụọ ajụjụ wee rịọ nyocha n'oge nnọkọ ndị a.
Echiche Azụmaahịa Bara Uru & Mbido
Kwenye nyocha gị na echiche ahia na nyocha anyị
Ndị nyocha anyị dị elu biputere echiche azụmaahịa nke puru omume dị elu site na iji usoro egosipụtara iji nyere aka kwado echiche ntụzịaka gị yana ịchọpụta na iji ohere maka uru n'ahịa.
Arịrịọ ntọlite ​​​​azụmahịa na AUDNZD site n'aka onye otu enwetala…
January 25, 2022/site na forexlens
Azụtala itinye ego na BTCUSD ugbu a! Enwere ọtụtụ arụmụka…
Anyị gosipụtara uru BTC na ahịa anụ ọhịa bea nwere ike nweta! Anyị nwere…
Atụmatụ ịzụ ahịa ụbọchị bụ ihe a na-elekwasị anya taa, anyị gosipụtara ma…
Usoro ịzụ ahịa ụlọ ọrụ bụ ihe agbadoro anya maka nnọkọ nke taa.…
E nwetala atụmatụ ego niile na ụzọ abụọ dollar! DXY…
Ekpuchiri ngwaọrụ Smart Money dị mkpa na New York taa…
Zụrụ BTC anyị na-arụ ọrụ n'oge nnọkọ ndụ mgbe obere oge anyị…
Atụmatụ mgbanwe anyị nwere mmetụta na ọchịchị ụnyahụ…
Kedu ihe nzuzo azụmaahịa GMT? Ọ dabara na oge, ee,…
Onye isi oche Federal na-emetụta atụmatụ ego nke taa…
Anyị ga-akụziri gị otu ị ga - esi
Were ahia gị na ọkwa ọzọ
Mụta ka ị ga-esi bụrụ onye ahịa na-erite uru taa
Were ahia ahia gi na ọkwa ohuru. Lelee anyị…
April 2, 2021/site na forexlens
Ọ bụrụ na a ezigbo osimiri mgbe mere a nkà ụgbọ mmiri, mgbe ahụ a ezigbo ụlọ…
January 13, 2021/site na forexlens
Ọ bụrụ na Echiche Na-adọta Ihe Ahụ A Na-eduzi Ya, Mgbe ahụ anyị nwere…
November 3, 2020/site na forexlens
Dika nnukwu Alan Watts kwuru n'otu oge:
Nke a bụ ezigbo ihe nzuzo…
October 14, 2020/site na forexlens
”Enweghị m ike ịlele Forex Lens dị elu! Ọrụ amamiihe, mgbe niile ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ị nweta ndụmọdụ ọkachamara! Nnukwu nyocha nke ahịa! N'ezie ọtụtụ ihe ọmụma karịa na-eso enyemaka na ndụmọdụ. Ga-akwado onye ọ bụla chọrọ ịmatakwu ihe ọmụma ma bụrụ onye ahịa na Forex. ”(2021)
Jay H.Onye ahia ahia
”Daalụ Institute Trader. You're bụ onye ahịa kachasị mma m hụtụrụla, ọ bụghị naanị n'ihi ahụmịhe gị mana kama nraranye gị nye ụmụ akwụkwọ gị. ” (2020)
Uchechi S.Onye ahia ahia
Emefuola m ọtụtụ puku dollar ma eleghị anya, n'afọ gara aga ịchọta ezigbo onye na-eweta ọrụ mgbaàmà Forex. Ọ dị mma ịnwe ọtụtụ ụzọ abụọ ma eleghị anya, anaghị m elele oge enyere, ọ dịkwa mma oge ọ bụla, mgbe m nọ n'otu ụdị ahịa ahụ dịka otu n'ime akara azụmaahịa. Ofdị nke ihe m na-eche. ”(2017)
Jeff W.Onye ahia ahia
" N'ịhụ ahụmịhe n'anya na otu esi egosi ya. Ezigbo nchikota nke onyinye na ihe omuma. Na-achịkwa nke ọma. Dị ka ọrụ ahụ. Jide ya ụmụ okorobịa! ”(2020)
Kaushal G.Onye ahia ahia
" Kwesịrị ekwesị penny ọ bụla. Adị m ezigbo ọhụrụ maka ịzụ ahịa mgbe m sonyeere ụlọ ahịa ha. M na-ejikwa atụmatụ atụmatụ ọnụahịa maka crypto ma ọ mara mma darn dị irè. Ana m akwado nke ukwuu Forex Lens nye onye ọ bụla ịmalite ịmalite ịzụ ahịa. O yiri ka ha nwekwara ọtụtụ ihe dị elu ugbu a na ọtụtụ ezigbo ndị ahịa na esemokwu nke dị ukwuu. Ana m ekwu na ọ bụ ọtụtụ ihe ịga nke ọma m nwere n’ebe ha nọ! ”(2020)
Doris B.Onye ahia ahia
Mụta otu esi azụ ahịa Forex site na A ruo Z
Mmụta Azụmaahịa Forex
Etu ị ga-esi jiri akara ndị Forex Emere Ihe Rightzọ Ziri Ezi
March 18, 2020/nke Op Ed
February 21, 2020/site na forexlens
Chọta ezigbo Broker iji gbuo Ndị Ahịa
February 14, 2020/site na forexlens
Inweta ahia ahia
February 10, 2020/site na forexlens
Iwulite oru maka ahia ahia ubochi
February 6, 2020/site na forexlens
Uzo esi abanye na ahia ahia ubochi
February 3, 2020/nke Op Ed
Nkà na ụzụ na akpa gị
Leverage ahụmịhe nke ndị nyocha anyị na teknụzụ ma soro usoro mmụta gị ọsọ ọsọ. Anyị na-egosi gị otu ị ga - esi nweta ego na - akwụ ụgwọ site na azụmaahịa Forex site na iji usoro azụmaahịa na njikwa ihe egwu.
Chekwaa oge na eserese!
Chekwaa ọtụtụ awa na-enyocha eserese ịchụ nta maka ezigbo ntọala setups. Anyị na-achọta echiche ahia bara uru maka gị iji nyochaa. Weghachi oge gi. Nnwere onwe ego dị ukwuu, mana nnwere onwe oge bụ ihe niile.
Inwekwu echiche ahia - na obere!
Nweta ọ bụghị naanị 1, mana ọtụtụ ndị nyocha teknụzụ nwere atụmatụ azụmaahịa dị iche iche (dịka Smart Money) iji nyere gị aka na azụmaahịa gị - yana obere obere!
Lelee, Mụta & Uru ọnụ
Ndabere nyocha ahịa zuru ezu, echiche azụmaahịa, yana nnọkọ Q&A - adị kwa ụbọchị! Mụọ otu esi azụlite ezigbo ahịa na usoro ndị anyị na-akụzi. Ga - abụ onye na - azụkarị ọzụzụ ma na - eme nke ọma ozugbo ị ghọrọ Pro Trader!
Mụọ na gburugburu ebe obibi na-enweghị ihe egwu
Malite ahia ahia na ebe ahia na-enweghị ihe ize ndụ mgbe ị na-amụ ihe. Nwere ike ime ka ịzụ ahịa azụmaahịa gị na-enweghị nchekasị nke ịhapụ ezigbo ego. Dingzụ ahịa bụ nkà nke nwere ike ịkwụ gị ụgwọ maka ndụ.
Otu Nkwado Ndị Ahịa kacha mma
Gị na ndị otu anyị na-akparịta ụka oge ọ bụla Nsogbu ma ọ bụ zitere anyị ajụjụ gị, nzaghachi na nchegbu gị [email protected]. Anyị nọ ebe a mgbe niile iji nyere gị aka njem njem ahia gị.
Nata ozi ịntanetị kwa ụbọchị na ihe anyị na-ahụ na Forex ahịa
Azụmahịa zuru oke + Chọpụta n'ime kandụl
Arịrịọ ntọlite ​​ahia ahia TP1 + DXY Rally na-aga n'ihu
Azụla Dip ahụ Ma + DXY Zụrụ Model arụ ọrụ
Uru BTC n'ahịa Bear + EURUSD, USOIL, Uru Ọlaedo
Atụmatụ ịzụ ahịa ụbọchị + uru GOLD na-agbanwe agbanwe
Usoro ịzụ ahịa ụlọ ọrụ + NZDUSD emeghere ebumnobi
Atụmatụ ego enwetara + BTCUSD na ebumnuche USOIL kụrụ
Echiche adịchaghị nke Smart Money + Atụmatụ ọla edo
BTC zụrụ arụ ọrụ + Outlook ahịa maka izu na-abịa
Atụmatụ ngbanwe dị na mmetụta + BTCUSD enweghị aha
Ekpughere ihe nzuzo ịzụ ahịa + GOLD & USOIL kpara mkpamkpa
Atụmatụ ego + Anụ Crypto ka na-ebelata
Page 1 nke 50123>»
Page 1 nke 199123>»